यस्ता लक्षण देखिए हुनसक्छ काे-राेना भाइरसको संकेत, सामान्य नठान्नुहोस् ! जनचेतनाका लागि सक्दो सेयर गरौँ – Annapurna Daily
यस्ता लक्षण देखिए हुनसक्छ काे-राेना भाइरसको संकेत, सामान्य नठान्नुहोस् ! जनचेतनाका लागि सक्दो सेयर गरौँ
On May 17, 2021 2,297
काठमाडौँ – को-रोना भाइरसको दोस्रो लहरका बीच मास्क, सामाजिक दुरी र स्वच्छतालाई कायम राख्न निकै अत्यावश्यक भएको छ । हुन त को- रोना वा सामान्य रुपमा लाग्ने खोकीलाई चिन्न मुश्किल छ तर यदि तपाईं केही विशेष कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ भने को- भिड–१९ को संक्रमणपश्चात् लाग्ने खोकी वा अन्य लक्षणको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ ।
१) सुँघ्ने क्षमता गुम्नु :- चिसो र रुघा–खोकी लाग्दा मानिसको नाक बन्द हुनु स्वभाविक हो । तर यदि सुख्खा खोकी र ज्वरोका साथै तपाईंको सुँघ्ने क्षमतामाथि पनि प्रभावित भइरहेको छ भने यो को- रोना भाइरसको लक्षण हो । एक रिपोर्टका अनुसार को- रोना भाइरस संक्रमित करिब ४१ प्रतिशत रोगीमा यो लक्षण देखिएको छ ।
को- रोना भाइरसको स–साना लक्षण पनि बुझ्न जरुरी छ । को- रोना लक्षणको सुरुवातमा पहिचान गरेर तपाईं गम्भीर रुपमा बिरामी हुनबाट आफूलाई जोगाउन त सक्नुहुन्छ, यसो गरेर तपाईंले अरुको पनि ज्या- न जोगाउन सक्नुहुन्छ ।
६) लगातार खोकी लाग्नु :- यदि तपाईंलाई लगातार खोकी लागिरहेको छ भने यो को- रोना भाइरस लागेको संकेत हुनसक्छ । को- भिड–१९ मा बिरामीको गलाबाट खोकी लाग्दा लगातार एक प्रकारको आवाज निस्कन्छ । यसले मानिसहरुको आवाजमा पनि थोरै प्रभाव पार्छ । लगातार लाग्ने खोकीले घाँटीको एयरवेजलाई प्रभाव पार्ने भएकोले यस्तो हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा